Madaxweynaha Iran oo si toos ah Israel ugu eedeeyey dilka saynisyahankoodii | Somsoon
Home WARAR Madaxweynaha Iran oo si toos ah Israel ugu eedeeyey dilka saynisyahankoodii
Madaxweynaha Iran, Xasan Ruuxaani, ayaa ku eedeeyey Israel in ay dishay saynisyahankii ugu sarreeyey khubarada nukliyeerka Iran Mohsen Fakhrizadeh, waxaanu intaa ku daray oo yidhi “falkaasi hakin maayo barnaamijka nukliyeerka Iran”.
Dhanka kale, hogaamiyaha sare ee ruuxiga ah ee Iran, Aayatullah Cali Khaaminei, ayaa dhaleeceeyey dilka saynisyahankii ugu sarreeyey khubarada nukliyeerka Iran. Waxaanu qoraal uu Twitter-ka ku baahiyey ku tirtirsiyey xukuumadda Iran in ay “si dhab ah u daba gasho fal dembiyeedkan oo ay ciqaabto iyaga iyo ciddii amarka ku siisay ba”.
Madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in “dalkiisu goorta ku haboon” ka falcelin doono dilkaas Fakhrizadeh, lakiin aanay arintaasi “Iran ku dirqiyeyn in ay go’aan hubsiimo la’aan ah qaaddo”.
Madaxweynaha oo gudoominayey shirka golaha wasiirada oo toos looga baahiyey Telefishanka dawladda ayaa yidhi “cadowga Iran ha ogaado in shacabka Iran iyo masuuliyiintiisuba a qabaan geesinimo ay kaga aar gutaan fal dembiyeedkaas oo aanay ka gacmaha ka laaban doonin”
Seynisyahankani barnaamijka Niyukleerka Iiraan Mohsen Fakhrizadeh ayaa lagu khaarajiyay meel u dhaw caasiamda Tehran, waxaa sidaasi sheegay wasiirka gaashaandhiga Iran.
Fakhrizadeh ayaa dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi ugu dhintay isbataal ku yaala magaalada Absard.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iraan Mohammad Javad Zarif, ayaa cambaareeyay dilkaasi isaga oo ku tilmaamay “ficil argagixiso”.
Saraakiil kale oo reer Iiraan ah ayaa waxay dhankooda dilkiisa ku eedeeyeen inay masuul ka tahay Israa’iil oo ay ka dambeyso.
Article horeHowlgal ka dhacay Sh/Dhexe oo Shabaab badan lagu dilay kuwo kalena nolosha lagu qabtay
Article socoda Dhageyso: Jeneraal Xuud oo bixiyey wareysi xasaasi kuna dhaartay inuu DF ‘ka xoreynayo’ Hiiraan